Dagaal xalay ka dhacay Muqdisho iyo guulo la kala sheegtay. – Radio Daljir
Dagaal xalay ka dhacay Muqdisho iyo guulo la kala sheegtay.
Maajo 16, 2011 12:00 b 0
Muqdisho, 16 May- Dagaal qadhaadh oo la isku waydaarsaday jaadadka kala duwan ee hubka fud-fudud iyo madaafiic ayaa agagaaraha kulliyaddii hore ee Jaalle Siyaad ee magaalada Muqdisho ku dhex maray ciidamada Amisom iyo kuwa Alshabaab, oo isku dayayay in ay dib u qadsadaan degaanno hore looga qabsaday.
Wariyaha Daljir ee Muqdisho Maxamed C/hi Suldaan ayaa sheegaya in dagaalkan oo cuslaa uu soo gaadhay saaka waabarigii, isla markaana ay jiraan khasaare shacabka ka soo gaadhay madaafiic dirirtaas la isku waydaarsaday, inkasta oo aanay jirin xogo rasmi ah oo ay xarumaha caafimaadka ee magaaladaasi ay bixiyeen.
Ciidamada Burundi ee qaybta ka ah nabad ilaaliyeyaasha Amisom ayaa dagaalkaas ku lug lahaa, kaasoo dhacay markii Alshabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ay ciidamadaasi ku leeyihiin kulliyaddii Jaalle Siyaad.
Badiyaa dadkii deganaa degaannadaas ayaa hore uga qaxay, waxana khasaaraha dagaallada imika Muqdisho ka dhacaa ay dadka ku saameeyaan madaafiicda habawga ah oo ugu taga goobo ka xasiloon furimaha colaadeed ee magaaladaas, sida xaafadaha Xamar-wayne, Madiina, iwm.
Saaka Muqdisho kaddib dagaal socday afar maalmood oo xidhiidh ah waa ay deggantahay, dhinacyadii ku dagaallamayayna waxa ay kala sheegteen guulo.
Ciidamada dowladda ayaa sheegey in ay ku suganyihiin qaybo ka mid ah dhinacyada suuqa Bakaaraha, xilli ay Amisom shacabka ku dhaqan degaannada Alshabaab ay taliyaan ee Muqdisho ay uga digeen joogitaanka xaafadaas, halka Alshabaana ay sheegteen in ay khasaare milatari gaadhsiiyeen ciidamada dowladda iyo kuwa Amisom.
Sarkaal u hadlay ciidamada dowladda federaalka ah ayaa daljir u sheegey in dagaalladii Muqdisho beryahan ka socday ay ku dileen in ka badan 120 ka tirsan dagaalyahannada Alshabaab.
Xuska labaatanaad ee gooni-isu-taagga Somaliland oo maanta la xusay.
Dhismaha iyo dayactirka terminal-ka madaarka Bander Qaasim, Bossaso oo dib u bilawday.